Talaado 11 Bisha Koobaad 2022
Isniin 10 Bisha Koobaad 2022
Naadiga Xilliga Firaaqadu
Axad 9 Bisha Koobaad 2022
Naadiga Xilliga Firaaqadu Ku noqo fududaanta nolosha, qorraxda iyada oo loo marayo dariishadda iftiinka iyo hooska ee loo yaqaan 'skissross'. Si aad sifiican uga tarjumto dhadhanka dabiiciga ah ee guud ahaan goobta, si buuxda u adeegso naqshadeynta log, fudud oo casri ah, raaxada aadanaha, culeyska jawiga farshaxanka. Midhaha soo jiidashada Oriental, oo leh jawi jawi gaar ah. Tani waa muujinta kale ee gudaha, waa dabiici, saafi, isbeddel.
Baakadaha Shaaha Qalalan
Sabti 8 Bisha Koobaad 2022
Baakadaha Shaaha Qalalan Naqshadeynta waa weel silsilad ah oo midabbo firfircoon leh. Isticmaalka midabbadaha iyo qaababka hal-abuurka leh ee iftiiminaya waxay abuureysaa naqshad iswaafajinaysa oo ka tarjumeysa ku-shubashada dhirta ee SARISTI. Waxa naqshadeena ku kala duwan ayaa ah awooddeena inaan siinno qallooc casri ah qallajinta baakadaha shaaha. Xayawaannada loo adeegsaday baakadaha waxay metelaan shucuur iyo xaalado dadku inta badan la kulmaan. Tusaale ahaan, shimbiraha Flamingo waxay matalaan jacayl, orsada Panda waxay u taagan tahay nasasho.
Baakadaha Saliidda Saytuunka
Jimco 7 Bisha Koobaad 2022
Baakadaha Saliidda Saytuunka Sidii Griiggii hore u gooni u rinjiyeyn jireen oo u qaabeyn jireen amphora kasta oo saliid saytuun ah (weel) si gooni ah, waxay go’aansadeen inay maanta sidaas yeelaan! Waxay dib u soo nooleeyeen kuna dabaqeen farshaxanimadan iyo dhaqankan soo jireenka ah, wax soo saar casri ah oo casri ah halkaasoo mid kasta oo ka mid ah 2000 dhalooyinkii la soo saaray ay leeyihiin qaabab kala duwan. Dhalo kasta si gaar ah ayaa loo qaabeeyey. Waa naqshad toosan oo hal-nooc ah, oo laga soo qaatay qaababkii hore ee Griigga oo leh taabasho casri ah oo u dabaaldegeysa dhaxal saliid saytuun ah. Maaha goob goos goos ah; waa khad toosan oo hal abuur leh. Khad kasta oo wax soo saar ah wuxuu abuuraa 2000 nashqadood oo kala duwan.
Khamiis 6 Bisha Koobaad 2022
Calaamadeynta 1869 Principe Real waa sariir iyo quraac ku taal meesha ugu dagan Lisbon - Principe Real. Madonna guri uun bay ka iibsatay xaafaddan. B&B-kan wuxuu ku yaalaa daar 1869 qadiim ah, wuxuu hayaa soo jiidashadii hore oo lagu qasan yahay gudaha gudaha, isagoo siinaya muuqaal raaxo iyo dareemo leh. Calaamaddan ayaa looga baahnaa inay ku darto qiimayaashan astaanteeda iyo codsiyada astaanteeda si ay uga tarjumto falsafadda degelkan gaarka ah. Waxay ka dhashaa astaan isku dhafan farta caadiga ah, iyadoo la xusuusinayo lambarradii hore ee albaabka, oo leh qaab qoraal casri ah iyo faahfaahin ku saabsan astaanta sariirta qaabaysan ee L of Real.
Alignment to Air Animada 3D Isniin 4 Bisha Todobaad
Marais Baakadaha Hadiyadaha Keegga Axad 3 Bisha Todobaad
Cliff House Degenaanshaha Usbuuca Dhammaadkiisa Sabti 2 Bisha Todobaad
Giraantu Sariirta Bisadda Naadiga Xilliga Firaaqadu Baakadaha Shaaha Qalalan Baakadaha Saliidda Saytuunka Calaamadeynta